Mogadishu Journal » Baarlamanka Oo Maanta Kulmaya Kana Doodaya Dhismaha Guddiyada Baarlamanka.
(mjournal):Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta kulmaya kana doodaya arrinta ku saabsan sameynta guddiyada Baarlamanka.
Kulanka maanta ee Barlamanka Soomaliya ayaa ajandihiisu yahay guddiyada Barlamanka ee 16-ka ah, kuwaas oo guddi dhawaan loo xilsaaray ay kasoo tala bixiyeen islamarkaana barlamanka hor keeneen.
Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ka mid ah xogheynada Barlamanka Ayaa saaka sheegay in gudoomiyaha Barlamanka Soomaliya oo la tashanaya 2-diisa ku xigeen uu Barlamanka hordhigi doono 16-ka gudi ee uu Barlamanku yeelanayo si ay go’aan uga garaan.
Sidoo kale xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud ayaa sheegay in iyadoo la cuskanayo Qodobka 57-aad ee xeer hoosaadka Baarlamanka ay gudiyadu iska dhex dooran doonaan gudoomiyaha gudi weliba iyo ku xigeenkiisa.
Doodda gudiyada ayaa laga yaabaa inay sii socoto inkastoo aan la ogeyn inta ay sii socon doonto, iyadoo uu fooda nagu soo hayo waqtigii ay baarlamanka Soomaaliya fasaxa geli lahaayeen, iydoo uu barlamanku shaqo badan soo qabtay wixii ka danbeeyay bishii Ougost oo ay dalka ka bilaabatay doorashada madaxda Qaranka.